Abaningi ebusika bavame zokushushuluza futhi bachitha iholidi lakho nje e-Europe, okuyinto akumangalisi: omuhle kakhulu ukuhlanganisa aziphumulele nge izizinda ngokusebenzisa amasayithi adumile namasiko, futhi uhlobo nemizana European. Futhi, kwacaca ukuthi, lokho akusho ngempela uye ku zokungcebeleka ezibizayo, njengoba amazwe ezifana Bulgaria neSerbia, futhi, kungaba ukuziqhayisa ski yayo zokungcebeleka. Ibhajethi snowboarding eqhweni futhi kungenzeka eCzech Republic, Romania, Slovenia nabanye. Kulesi sihloko sizoxoxa mayelana engabizi kakhulu ski resort eYurophu, isilinganiso zazo lapha ngenzansi.
indawo 20: Formigal, Spain
Ungomunye zokungcebeleka yesimanje kakhulu futhi ezishibhile eSpain, okuyinto Itholakala Tena Valley, eduze komngcele waseFrance. Lokhu ski resort siqukethe 150 amakhilomitha of amagquma kanye emizileni. Abaningi ski resort e-Europe, futhi lokhu omunye umKristu ngokukhethekile, enze kube nokwenzeka ukuba zokushushuluza kusukela ngoDecember kuya ekuqaleni kuka-March. Lokhu resort - indawo elungile kuze kube iholidi ngaphambi umndeni. Kukhona izingadi, zokudlala kanye abafundisi 200 ukulungele ukufundisa izingane zokushushuluza. Izindleko ithikithi lift izobiza 40 euro ngosuku. Ungakwazi ukuthenga ithikithi lonke isizini, kanti intengo salo 600 euro.
indawo 19: Ttsuma, Switzerland
Ngo esifundeni "Abane izigodi" kukhona izindawo imfashini futhi kuyabiza. Lapha ungakwazi futhi uthole eziphansi ski resort eYurophu. Phakathi kwabo Ttsuma, engekho izivakashi Russian. Ngemva sokuxazulula emaphethelweni esifundeni, ungakwazi ukugibela phezu amathrekhi eduze ethandwa WESIGABA, Veysonnaz futhi Verbier. Ngaphezu ski emizileni, ke idume sledge yayo 10-ikhilomitha umzila. Indawo ngokuvamile nibaluleke okuningi, nakuba isibalo kungenziwa kususwe nangenxa 80 euro.
18 okusha Bansko, Bulgaria
Kungenzeka ukuba uphumule Bansko ngoba euro angu-300. Ngesikhathi okuvelayo efanayo nemizwelo kuyoba okwanele. Lena ngelinye lamadolobha esimanjemanje kakhulu futhi entsha ski resort, ngenkathi unqobile kakade ukuqashelwa we abalandeli asebenzayo ebusika namaholide, okuyinto Sekuyisikhathi eside wavakashela ski resort eYurophu. Bansko inikeza 6 emizileni ngilulekela phezu amakhilomitha nane. Basuke etholakala ezingeni ukuphakama 2.5 km ngaphezu kogu lolwandle. Chairlifts futhi eqhweni ngamakheshi Ungasingatha abagibeli 3,000 ngehora.
17 indawo Schladming, Austria
He is resort inombolo eyodwa Styria. Lokhu resort itholakala engxenyeni esentshonalanga ye esifundeni endaweni engamamitha 750 m ngaphezu kolwandle. Lokhu idolobha elincane elinabamemezeli izindlu agqamile bantu abanomusa nabathanda kakhulu. Ngezinye isevisi yakho kukhona khulula Shuttle oluzothatha kuphi esifundeni, futhi 86 ngamakheshi. Abaningi ski resort e-Europe, futhi lokhu omunye umKristu ngokukhethekile, ukukunikeza ride esikhathini kusukela ngoDisemba kuya ku-Ephreli. Izindleko ithikithi lift umuntu omdala - 31 euro izingane - 16 Euro.
indawo 16: Livigno, Italy
Okusanda, Livigno laliwumuzi omncane Italian yesifundazwe. Kuyinto km 35 kusuka Bormio, eduze komngcele waseSwitzerland. Ngo Livigno njalo sezulu ephelele futhi cishe kungabikho moya, futhi ukhuluma ngezinzuzo ukuzilibazisa lapha. ikhava Snow kule ndawo ifinyelela 2.5 m. Ukuze uthole ithikithi omdala lift abiza euro 36.
indawo 15: Montgenevre, France
Anyone enyula ekuzijabuliseni ebusika Montgenevre etholakalayo kuyoba km 100 nemithambeka enzima nelula, futhi uzokwazi ukushayela eFrance, futhi e-Italy, njengoba umzana 2 km kude umngcele, futhi ixhunyaniswe ngamakheshi ukuba resort Claviere. Uma sicabanga European ski resort Wabasaqalayo, kuyafaneleka ukuthi lokhu Lifanele ngabo ngoba kukhona nakho abafundisi ngubani uyonifundisa ilungelo ukuma ngezinto zokushibilika eqhweni. Lapha, cishe njalo isigaba ihhotela 1-2 izinkanyezi. Izindleko okuwenza aqondane ngokulandelana 50 euro ikamelo 2 embhedeni-(kungenzeka ukuthola futhi ashibhile!)
indawo 14: Kappl, Austria
I izitatanyiswa ezimbalwa ungakhululeka Ischgl: emananini "bite" amahhotela futhi kungaba okwethusa inkalankala ubani akusho njengesisulu isizwe esicebile. Kodwa ungakwazi ngaso emizileni efanayo ukugibela ngokukhululekile kakhulu, ukuyohlala edolobheni Kappl 5 km, lapho ihhotela igumbi kabili izobiza euro angu-60. Ngesikhathi esifanayo Kappl inezidingo ski endaweni yayo, ngakho-ke uma kukhona eqhweni lapho ngimi ngokuntenga, une anele 40 km emithambekeni (ngesikhathi kulondolozwa sezinsuku ezingu-60 ukuthenga kule ndawo lingaphezu kwama-euro ezishibhile 20).
13 Indawo: Pinzolo, Italy
Eshibhile uzoya Italy zokushushuluza, uma ufika edolobheni Pinzolo, lapho amakamelo ngenani ehhotela azungeze 50 euro. In the phakathi ehlathini emhlabeni emzaneni kukhona 40 km umzila elula. Labo bazikhethele isabelomali kanye nekhwalithi ski resort eYurophu, le ndawo ukulingana kahle.
indawo 12: Soldo, Andorra
Nangu engcono ski resort wesifunda. Kuleli qophelo, konke entsha - ngamakheshi, amahhotela kanye izivakashi ezimbalwa kakhulu. Ngiphakamisa ezishibhile ski resort e-Europe, ungase futhi ukuya edolobheni eliseduze Pas de la Casa, alinikela 58 eqhweni ngamakheshi etholakalayo. Ukukhetha yiliphi ihhotela, kuxazulule endlini ephindwe kabili ngoba 40 euro.
indawo 11: Saint-Gervais, France
Ukukhetha ezishibhile ski resort e-Europe, banake lokhu. Lena Classic spa edolobheni, esemgwaqweni at ibanga elilodwa uhambo ku-gondola kusukela Megève. Futhi lapha ungathola phezu tram, okuyinto uya Mont Blanc, ngemva kwalokho idrayivu isivele kuze kube resort.
Lapha ungathola indlu encane ethokomele luzodla wena ishibhile kuka e Megeve, elise kamakhelwane. Indawo endlini ephindwe kabili izobiza 40 euro.
indawo 10: Omakoti-les-Bains, France
Lokhu resort esiyingqayizivele iseduze Meribel: ke okukuhlukanisa ngomzuzu-25 gondola ride. Yiqiniso, wena miss ithuba lokujabulela e walo mzana omncane, esisogwini eziqongweni, nightlife futhi entabeni umoya. Kulokhu, ngeke emuva phansi eqhweni, njengoba ubusuku ihhotela lizokubuyisela futhi kufanele uthole i-gondola. Indawo ngesikhathi ibambene isizini ehhotela ngempela eqolo - 30 euro kuzo double.
indawo 9th: Bohinj, Slovenia
Lena enhle yokuvakasha ye-ski eSlovenia. Itholakala ogwini Lake maphakathi Triglav National Park. Lokhu resort ilungele amaholide unyaka wonke. Ebusika, le ndawo uzothola ukuvela okuningi, bonke labo abaqala nje zokushushuluza ukugibela, kanye bonke labo omi isikhathi eside, kodwa abanesithakazelo Kulokhu eshibhe ski resort eYurophu. Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona ihlukaniswe 2 esishintshashintshayo ugibele: Coble futhi Vogel, okuyinto 12 km ngaphandle. amathikithi Phakamisa izobiza u- $ 20, futhi zokushushuluza ngokuqashisa - $ 10.
indawo 8: Kopaonik, Serbia
ESerbia, omunye izikhungo best of ski resort Kopaonik kubhekwe. Kuyinto resort yesimanje elise-Eastern Europe. Angaba ngiziqhayise ingqalasizinda evuthiwe. The yokungcebeleka ka Kopaonik ngezindlela eziningi zokungcebeleka ezibizayo akuzona bakhiphe elezinga eliphansi. Kuleli qophelo, ngesonto iholide izobiza ruble angu-20 000.
indawo 7th: Popov Hat, Macedonia
Popov Hat ingenye yezindawo nengabizi. European ski resort Abaningi zihlukaniswa amanani entengo aphezulu, kodwa kukhona iholide isonto lonke izobiza ruble 20 000. Itholakala entabeni oluwumbukwane, inikeza umbono omuhle. Yiqiniso, kule ndawo yeholide enkonzweni kanye nekhwalithi konke wawungaphansi edolobheni okukhethekile Switzerland neFrance, kodwa inzuzo yayo esemqoka itholakala ongaphakeme izindleko iholide.
indawo 6th: Borovets, Bulgaria
Fans of ezemidlalo ebusika, ngokukhetha iholide engabizi, ski resort kuleli zwe zihlale ethandwa. Borovets libhekene high quality futhi inkonzo imizila, kanye namanani aphansi. The yokungcebeleka kufanelekile imibhangqwana kanye nabantu abasha. Lapha futhi kusihlwa kukhona okuthile ukwenza :. Amaphathi, amathilomu, izindawo zokudla, njll I esima abemi lapha mayelana 18 000 ruble umuntu ngamunye.
indawo 5th: Jasna, Slovakia
Uma engcono ski resort eYurophu (Austria, eSwitzerland naseFrance) ngawe ebiza kakhulu, udinga ukuba banake edolobheni Jasna. Eshibhile futhi ethandwa, kuba eSlovakia. izinzuzo zalo zakhiwa ngamakheshi yesimanje, ngentengo ephansi, iqhwa kakhulu, eziningi emithambekeni ochwepheshe kanye Wabasaqalayo. Isonto iholide kuyokulahlekisela ruble 19.000.
indawo 4th: Spindleruv Mlyn, Czech Republic
Inani elikhulu of izivakashi indawo in the Czech Republic kuhlanganiswe iholidi esebenzayo ku ski resort. Uma ufuna ehlukahlukene ubuke leli lizwe ethokomele nemisebenzi zokungcebeleka ke resort of Spindleruv Mlyn ukhetho best. Yena ifakwe yesimanje izinga okusezingeni eqhweni ngamakheshi, kule ndawo kukhona imizila eminingi enzima nelula. Isonto iholide lapha kubiza ruble angaba yizinkulungwane 19.
indawo 3rd: Jahorina, Bosnia and Herzegovina
Ukuhlola engabizi ski resort e-Europe, singasho ukuthi Jahorina ingenye eshibhe. Inesibonakude emizileni enzima nelula, eyenzelwe skiers kanye snowboarders abanezizinda ezihlukene. Kuleli qophelo, ngesonto iholide izobiza ruble 19 000.
indawo 2nd: Veghel, Slovenia
Uma indawo ophithizelayo ngenombolo enkulu izivakashi akanakuma, futhi uthanda okuzolile nokunokuthula umndeni iholide, bese uya Vogl, elise Slovenia. Kuyinto yesimanje ski edolobheni nge ukubukwa umbukwane, nemithambeka ifakwe, ethokomele yokudlela encane. Kuleli qophelo, ngesonto iholide izobiza ruble 18,000.
indawo 1st: Poiana Brasov, Romania
Lokhu resort ithandwa kakhulu eRomania. Uma ungafuni ukuchitha imali eningi, kodwa ufuna usathola izinga lokuphumula, Poiana Brasov - lena ukhetho best. Eminyakeni ethile edlule, resort is kabusha ngokuphelele. Phakathi ukuhlala isonto lonke lapha kuzodingeka akhokhe ruble 16.000.
Njengoba singabona, okungcono ski resort eYurophu kungase kungabi njengoba ezibizayo ekuqaleni njengoba kungase kubonakale. Ukuchitha ngokuzilibazisa ungahlukaniswa ngokuvamile ube lincishisiwe ngokuthatha i search ezimele amahhotela ezishibhile namathikithi.
Eyokuqala toll road eRussia. Ikhwalithi imigwaqo Russian
Emahostela of neSamara region. Makalale Samara futhi Samara Isifunda: kuzibuyekezo, izintengo
Uphahla Ondulin: Izici ukufakwa